के भैरहेको छ ? – Merodesh.news
काठमाडौँ/प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ताजा जनादेशमा गएर आफूलाई जनताबाट नै दण्डित गराउन चुनौती दिएका छन् । आइतबारको राष्ट्रियसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दे प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जाने निर्णयको विरोध गर्नेहरुलाई निर्वाचनमा गएर जनताबाट...
कोहलपुर, २२ मंसिर । त्रिभुवन माध्यमिक विद्यालय कोहलपुरमा अध्ययनरत सात वर्षीया बालिकालाई ट्रकले ठक्कर दिएपछि कोहलपुर तनावग्रस्त बनेको छ । ट्रकको ठक्करबाट स्कुले छात्रा घाइते भएपछि बढेको तनावलाई मत्थर गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले कोहलपुरमा...
काठमाडौ, पुस २० ‘इनोभेटर’ ई. दिपेन्द्र कँडेले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन गलत र अपुरो भएको टिप्पणी गरेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कँडेलले...
काठमाडौं, पुस १९ नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानबिन उपसमितिका सदस्य प्रदीप यादवले विमान खरिदमा ठूलो घोटाला भएको भन्दै बहालवाला मन्त्री, सचिव र महाप्रबन्धकलाई तत्काल बर्खास्त गरी जेल हाल्नुपर्ने...
डा. केसी फेरी अनसन बस्दै
काठमाडौँ, पुस १७ चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै डा. गोविन्द केसी फेरी बुधबादेखि अनसन सुरू गर्ने भएका छन् । उनी भोलिदेखि आफ्नौ १६ औँ अनसनमा बस्ने भएका हुन् । करिब ५ महिनाअघि आफ्नो १५ औँ...
बिराटनगर, पुस १७ ‘नेपाली टोपी : हाम्रो गौरब, हाम्रो पहिचान’ भन्ने नाराका साथ आज देशैभर छैटौँ नेपाली टोपी दिवस भव्यरुपमा मनाईँदै छ । बिभिन्न स्थानमा र्याली, नाचगान गरिनुका साथै देशको पहिचान जोगाउन जोड दिदैँ बिभिन्न...